FIHAONANA AN-TAMPON’NY FRANKOFONIA : Orinasa fito tsy mbola naharay ny volany hatramin’izao | NewsMada
Miala tsikelikely ny takon-kenatry ny fitondrana Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao. Tamin’ity indray mitoraka ity dia mikasika ny fikarakarana ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia. Tsy araka ny lazain’ny filoha fa “tontosa tamin’ny antsipiriany”, feno trosa tao ambadik’iny fihaonana iny. Farafahakeliny, orinasa fito nanao ny asa nandritra ny fihaonana no mbola tsy naharay ny volany, enim-bolana aty aoriana…
Mbola maro ny tsy milamina na dia mirehareha fatratra aza Rajaonarimampianina Hery milaza fa tao anatin’ny fahombiazana tanteraka ny fihaonana an-tampon’ny frankofonia natao teto Madagasikara tamin’ny volana novambra lasa teo. Raha ny tena izy anefa, fahafaham-baraka no azon’ny malagasy taorian’iny fihaonana iny. Enim-bolana aty aorian’iny hetsika nolazaina fa manana fiantraikany iraisam-pirenena izay nandraisana olona an’arivony avy amin’ny vazan-tany efatra, Malagasy maro no mbola mizaka ny vokatry ny tsy fahatomombanan’ny fikarakarana. Mpandraharaha maromaro no milaza sy nanaporofo fa feno trosa tamin’iny frankofonia iny ary mbola maro izy ireo no tsy nahazo ny volany hatramin’izao.
Taorian’ny fanadihadiana nataonay no nahafantarana fa orinasa fito, farafahakeliny, izay isan’ny nanao ny asa tamin’iny frankofonia iny, no mbola tsy naharay ny volany hatramin’izao. Antotan-taratasy maro, eto ampelatananay, izay misy ny sonian’Andriamampionona Francia, mpikambana tamin’ny kaomisionina misahana ny serasera tamin’iny fihaonana an-tampon’ny frankofonia iny, ny mampalahelo dia tsy afaka alefa eto ny anaran’ireo orinasa ireo. Ny sasany amin’izy ireo mantsy dia efa rahonana mba tsy hamoaka vaovao mikasika ny fisian’ireo trosa ireo.
Vola tsy dia mankaiza akory…
Tsy voafaritra mazava kosa ny fitambaran’ireo trosa ireo noho izay fanagiazana ny vaovao izay hatrany. Ny loharanom-baovao kosa no nahafantarana fa misy amin’ireo orinasa ireo no mbola manana 4 tapitrisa ariary any amin’ny OIF (Organisation internationale de la Francophonie). Io trosa io izay tsy misy dikany raha mihoatra amin’ny vola lanin’ny filoha mivady mandeha mivoaka any ivelany. Tsy dia inona ihany koa raha toa ka mihoatra amin’ny vola lany amin’ny fikarakarana ilay horonan-tsary alefa any amin’ny Youtube antsoina hoe Fotoam-bita. Na izany aza anefa, na ny fanjakana na ny OIF tsy mahaloa io vola io.
Manoloana izany, ny fifanarahana nataon’ireo orinasa izay nisahana ny asa ireo tamin’ny OIF anefa dia mazava fa « amin’ny fandraisana ireo kaomandy, mandoa ny 20% ny vola hanaovana ny asa ny OIF » ary « atao amin’ny alalan’ny taratasim-bola avokoa ny fandoavana ny vola rehetra, ary aloan’ny OIF, birao rezionaly Antananarivo izay etsy Antaninarenina, mialohan’ny faran’ny volana novambra 2016 ny vola rehetra ».
Vita ihany anefa ny fihaonana rehetra, ary tsara ny vokatra voaray, araka ny nambaran’i Michaël Jean, sekretera jeneralin’ny frankofonia, sy Rajaonarimampianina Hery, nandritra ny fanakatonana io fihaonana an-tampony io ny volana novambra. Mbola misy anefa ireo orinasa tsy naharay ny volany.
Ny 31 janoary lasa teo, naharay taratasy avy any amin’ny birao rezionalin’ny Frankofonia avy etsy Antaninarenina ireo orinasa ireo. “Fandaminana ny fandoavana vola” no anton’io taratasy io. “Noho ny antony manokana, nahemotra ny 10 andro, andro fiasana, manomboka amin’ny 1 febroary 2017 ho avy izao ny fandoavana ny vola”.
Miova foana ny fotoana andoavam-bola
Tamin’ny taratasy nalefan’izy ireo ny 27 martsa, nitondra fanazavana indray ny teo anivon’ny kaomisionina misahana ny serasera fa nanatena ahazo ny famatsiam-bola ny volana febroary 2017 ny mpikarakara. “Tsy voaloa araka ny fotoana nomena ireo trosa ireo noho ny antony manokana. Manoloana izany, nahemotra manomboka ny 10 aprily 2017 ny fandoavana izany”. Iray volana taty aoriana, ny 3 may lasa teo, novain’ny OIF indray ny daty fandoavana ireo trosa ireo, tamin’ity indray mitoraka ity, niaraka tamin’ny fialan-tsiny hafa kely, “noho ny fisian’ny fandaminana manokana sy ny fandaminana ireo famatsiam-bola avy amin’ny OIF Madagasikara”. Tao anatin’io taratasy voasoratra tamin’ny teny frantsay ranoray io, nambaran’ny OIF fa orinasa roa tamin’ireo 9 manana trosa tamin’izy ireo no efa nahazo ny volany ny 18 aprily sy ny 21 aprily lasa teo. Ireo orinasa fito ambiny dia nampanantenain’izy ireo fa ahazo ny anjarany manomboka ny 15 may hatramin’ny 30 jona 2017. “Tsy miova intsony ireo daty ireo na misy inona na misy inona”, hoy ny fampanantenana nataon’ny OIF tao anatin’io taratasy io ihany.
Fantatry ny fanjakana tsara
Araka ny efa voalaza, nisy taratasim-bola nalefa tamin’ny iray tamin’ireo orinasa ireo ny 12 may lasa teo. Hagagana anefa ny an’io orinasa io, andro vitsivitsy taorian’izay, fa io vola io dia mbola tsy voarainy tao anaty kaontiny akory. Io orinasa io izay nilaza fa hitondra ity raharaha ity eny anivon’ny fitsarana, eo ihany koa ny fisian’ny fifanarahana nataony tamin’ny OIF izay milaza fa “entina eo anivon’ny fitsarana mahefa izay rehetra tsy manaja ny voalazan’ny fifanarahana. Rehefa tsy vitan’ny fifampiraharahana, entina eo anivon’ny fitsarana ara-barotra izany ady izany”.
Manoloana izao raharaha izao, tsy afaka milaza ny fitondrana Rajaonarimampianina hoe tsy mahalala ny fisian’io raharaha mahamenatra io, satria tao anatin’ny taratasy nalefa ny 03 may lasa teo, notsindrin’ny OIF tsara fa “nampahafantarina ny fitondrana Malagasy fa ireo trosa rehetra (tamin’ny fikarakarana ny fihaonana an-tampony, ndlr) dia tokony aloa mialohan’ny faran’ny volana jiona 2017.